Bathuthukisa ezemidlalo kwabesifazane KwaNyuswa | News24
Bathuthukisa ezemidlalo kwabesifazane KwaNyuswa
Iqembu le bhola lezinyawo labesifazane i-Juventuz WFC.Isithombe: sithunyelwe
OWESILISA waKwaNyuswa une phupho lokubona iqembu lakhe lebhola lezinyawo nele-netball likhula usuku nosuku.
UMnuz Bhekokwakhe Nene (30) usungule amaqembu abesifazane lebhola lezinyawo nele-netaball, ngemuva kokubona abesifazane abaningi benothando nentshisekelo kwezemidlalo, kodwa wabona ukuthi lolu thando lwabo lunganakiwe emphakathini.
“Abaningi besifazane bebe nentshisekelo kwezemidlalo, kepha amalungu omphakathi abe nganakile, ikakhulukazi emdlalweni webhola lezi nyawo. Ngisungule lama qembu ngo-2016 ngemva kokubona isidingo seqembu labesifazane kwezemidlalo. Amaqembu ami aqeqeshela ePinetown ngoba iyona ndawo emphakathi nedolobha njengoba iningi laba dlali besuka ezindaweni ezehlukene.”
Uthe okwamanje, amaqembu womabili adlale imidlalo namanye amaqembu amancane emphakathin.
“Iqembu le bhola ngiliqambe ngokuthi yi-Juventuz Women’s Football Club kwathi iqembu le-netball lona ngilibiza nge-Thembelisha Netball Club. Womabili lama qembu adlala namaqembu amancane asuke ezindaweni ezehlukene kubalwa eThekwini, ePinetown naKwaNyuswa.”
Inselelo enkulu ababhekene nayo wukuthi amantombazane amaningi alawulwa yizithandani zawo, okwenza kube nzima ukudlala kahle eqenjini.
Uthe: “Iningi lezi thandani zalabadlali aziwakhuthazi ukuba eqhubeke nokudlala, ikakhulukazi lawo adlala ibhola lezi nyawo. Isikhathi esiningi babatshela ukuthi ibhola lidlalwa ngabesilisa kuphela hhayi abesifazane. Lokhu kwenza kube nzima kithina njengaba qeqeshi ngoba abanye abadlali bagcine sebeyekile, lokho kwenza iqembu lihlakazeke.”
“Kodwa-ke, senza konke okusemandleni ukweluleka amalungu eqembu. Sibatshela ukuthi bangalaleli okubi abakutshelwa abantu kungaba emphakathini, izithandwa zabo noma amalungu omndeni.”
Uqhube wathi enye inkinga ababhekene nayo ukuthola imoto ethutha iqembu uma linemidlalo
Uthe: “Sinenkinga enkulu ngokuthutha iqembu uma linemidlalo. Amantombazane amaningi avela ezindaweni ezikude futhi kwesinye isikhathi awanayo imali yokugibela. Lokho kwenza ukuthi ngigcine ngisebenzisa imali yami ukuze ngizogibelisa labo abaswele.”
Uthe bengajabula uma uMnyango wezeMidlalo uxhasa lama qembu.
“Singathokoza uma umnyango ungasixhasa ngoba siyaludinga uxhaso nokuthi akujwayelekile ukubona iqembu labesifazane nele-netball elisuka ezindaweni ezise makhaya nase lokishini.
“Sidinga umfaniswano weqembu, imishini yokuzivocavoca kanye namateku ebhola. Uma kukhona othanda ukuxhasa lama qembu, samukela noma yiluphi uhlobo lomnikelo.” Uthe uhlela ukumema amantombazane amaningi ukuba ajoyine amaqembu akhe.
“Sihlela ukuba nemidlalo ezikoleni ezehlukene ukuze siqoqe labo abanethalente.” Uma uthanda ukwazi kabanzi nge-Juventuz FC noma iThembelisha NC xhumana noMnuz Bhekokwakhe Nene enombolweni ethi:071 559 4509.